Deg Deg:Jaaliyadda Ugaadhyahan Oo Ka Hadashay Dulaanka Somaliland Ee Tukaraq iyo Xubno Bahrarsame Ah oo Tv-ga xalay ka Hadlay | khaatumonews
Deg Deg:Jaaliyadda Ugaadhyahan Oo Ka Hadashay Dulaanka Somaliland Ee Tukaraq iyo Xubno Bahrarsame Ah oo Tv-ga xalay ka Hadlay
Jan 11, 2018 - 18 Aragtiyood
Madaxwayne muuse biixi iyo dr Ali khaliif galaydh ciyaarta ha laga daayo,
Caqliga Alle idinka qaad, wallaahay waa lo`, intay telephone isku xidhatay bay waxan soo mal maluuqeen. Yaqaan dhibe waa uun yaqaan dhibe. Intay dadkii jaaifeeyeen bay leeyihiin dhulbahantow dagaalama oo dhulka noo xoreeya. Markii Faroole Taleex, buufinayey xagee Ugaadhu joogtay, reer Taleex miyaanay ahayn Ugaadhyahan. Tuka raq waa magaalo Siciidrati. Taariikhdeeda waxba la idinka weydiin maayo. Magacan wallaahay ugaadhii uun buu idinka dhigay iska bedela oo qaata maxamud Siyaadkii la idiinku walqalay.
Dhulbahante uun miyaad ka adaagtihin damiirka la idin ka qaad, laba mamul ba ishaysta Dhulbahante baad aragtaan..
Khaatumonews warka dhulbahante wabside ka daaya yaan la soo galin dhulbahante ha isdifaaco hadana dhulbahante kala guraya.
Wiil hart guul dhuloos
Adeer isaaq waasoo tashadeen inay dhulbahante uga aargoostaan dhibaatadiixiligii siyaad bare kuwa lasocdaana waa dad hungiri qaaday ma oga gunimada kusoosocota waa in ladagaalamaa kii dhulbahante ee sooraacana isna madaxa laga gooyaa
Kkkkk duli ku baxa kuwaasi ma metelaan ugaadhyahan. Waa kuwii puntland kiraysatay. Maskaxdooda waxaa lagu qafiley dhulbahante kala daadintiisa iyo ximaarnimo. Niic ah. Caqligiina garoowe ayaad ismaqashiinay saan.xorayna waad ku baaqaysaan .waa suaalle maydinkaa isaaq dhul ka xoraynaya ileen waydinkan walaalihiin ku dhegane.kkkk sidee ayaad isaaq ula dagaalami kartaan. Ma garoowe ayaaad ku faanaysaan. War farooole iyo ciise maxamuud gaas ka diide in tukaraq laga dabo tago. Dhul saas laguma difaaco. Sartuna meesha ay ka qudhuntay waa koox daas maan gaabka ah ee loo xilsaaray dhulbahante kala gurkiiisa. Wejigiin gubey maxaad xorayn hada kohor ugu baaqi waydeen. Ma markiii jimcaaale cashuuurtii tuka raq laga baacshey ayaad dhabayacada ka dhinac hinaasteen. Duli ku baxa maxay umada cee beeeyeen. Doqonnimada iyo caqli xumada iska daaaweeya. Kaxoroooba aragtida dhabayacada. Dadkiiiniii geelashiiinii cagaare iyo hawd ayay jiraaan. Maalinkii dhawaydna dadkaa iyo reermiyigaasi qayb libaax ayay ka qaateen colaadiii qoriley. Ku waas ayaa ugaadhyahan ah xalaal ah. Laakiin kuwa faranjigu faraxumeeeyey gumaysi kalkaalka ahi gunada majeerteen ku nooli masheegan karaan ugaadhyahan. Waa la haysta yaashii xumaanta iyo nacaybka iyo xagjirnimada iyo muxubada dhabayaco madax martay. Qofkii u fiirsada wuxuushtaas jeebka puntland ku jiraa wuu yaabayaa. Dadkani waa dadkii ssc gumeeyey kala jebinta iyo u xayd xaydashada sokeeyaha loo xilsaaray. Waxaa ay soo baxaan xiligan oo kale. Intooda badan waxay qabaan naago majeerteen ah. Waa damiiir laawayaal utaaagan kala dirka dhulbahante. Nasiiib xumada maanta isaaq xuduuuda way sooo xidhayaaan. Farooolena calan cad buuu taagaye sideee yeelaysaaan. Jiiil baaqdayoow mameteshaan ugaaadhooose meeshiii aaad ku nooolaaan lahaydeeen kafeketa. Garooowe tarxeeel iyo masaafuris baaa idiiin yaaala. Waayo nabadoooda ku cayaari maaayaaan. Waaayo madaafiiic iyo biii eem ayaaa lagu gataaacayaaa. Waaa ladooogiye yaaan ladacarooon.magac yadiiina iyo maqaaxiyaha majeeerteeenka aaad ka sooo qaaadataaan walaaal nacayba waa lala socdaa. Toobada haseegina. Ratigu tag ana ugu tumey ayaaa taaale uftiiina qarsada. Lama arag dad dagaaal ku baaaqaya hadana dadkooodii weeerar ku ah. Layaaabi maayo hadiii caqli jiri lahaaa sida aaad wax u canbaaarayseen waaad cilmi yay lahaydeeen laaakiiin matihiiin dadkiii taas fahmi lahaaa . kuwiiiniii puntland sooo maray ooo dhani waxay ahaaayeeen kuwo saabuunta dharka cuna awr halaaabay aan laway diin. Kooxdiinan garanley ugaadh yahan ama qudhinjooogta ah ayaa il duufiyey. Mana metashaan shacabka ugaadhyahan ee xalaasha ah.
Waar ugaadh yahan
Ma midgaa iyo eyle oo sagaaroonyinka dabta
Shacabka ugaadhyahan waxaa looga digayaa in dagaalka dhabayaco ku socda in aan xaabo laga dhigan oo ay shacabkooda somaliland ka mid noqdaan hadaad maamulka majeerteeniya iyo garoowe difaacaysaan waxba geed ha isku qaranina cadaysta sxb somaliland waa qaran ee qabiil ma aha adigu waxba qabiil haku gaban ee adigoo maamulka majeerteeniya ah kaalay ku dagaalan xuduuda somaliland
oo laascaanood bayba haystaana maxaad uga aamusnaydeen oo tukaraq maanta looga hadlaya sadex boqol oo km ayay snm gudaha ugu jirtaa dhulweynaha dhulbahante anigoo aan difaacayn xayawaanadii cuqdadaysnaa ee snm futada u leefayey .talo guud baa loo baahan yahay ee waa in talo guud laisugu yimaado oo dhulkan inagaa leh kawada xaajoono sidii looga kocin lahaa beelaha snm ee soo duuleey
deeriyahan.biciide. sangaale futaxun kkkk deerada iyo biciidka maxaa galay ugaadhyahan waa tolkayo warkooduna waa sax haka guban rufyaano ayay lahadlayeen .horta ninka ina dhulgub layiraahdo warkiisu in badan buu ugu soo noqnoqday waaba caadaqaate weyn oo uray .ilaahay cali maraykan ha xafido geesi dhulbahante kujira ogaada oo odayga dhaqaaleeya oo wanaajiya waa ninkii yidhi diinta iyo dhulbahante labaduba waa muqadis
Ugaadhyahan markay iidoor iyo wixii lasocda ay dabada u qooyaan ayaad baranaysaa waxa ay yihiin.
KKkkkkkkkkkk xafiiska dhexe ee beesha Ugaadhyahan kulahaa kkkkkkkkkkkkk waar waxan waxaa soo malmaluuqay habaraha qurbo joogta majeerteen oo iska dhigaya Dhulbahante kkkkkkkkkkkkkkk mar labaad ku noqda markan waa idinka fashilantaye pintiland wixii ceydhsanaya qof reer khaatumo ah inuu ku farxo mooyee ka nixi maayee
intii somalilnd werartay tukaraq
waxaa kahadlay 4 nin oo Bhararsame ah
xitaa ciidankii somaliland ee galay iyo ina cambaashe lama maqlin.
tungub iyo saaxiibkiisii hargaysa la joogey
qofkale oo dhulbahante ahi kama hadlin ama somalilnd hajoogo ama puntland ama federal.
Malaa arinkaas ayaa jaaliyada ka yaabiyey
Ninka websitken leh was majeerteen was nay cadahay ujeedkisa inu isku diir dhulbhante iyo isaaq taasina waligeed maa dhici doonto mangabka majeerteenia waxan Kula talking laha inu ka gabsado siyasad somaliland
Kuwa baaqan Soo saaray waa kuwii dhabayacadu qabtay ee magaca ugaadhyahan Isticmaali Jiray kkkkkk Axmed karaash Group
hadal haan mabuuxsho ninki dalkisa difaacayow almiidaan waasec way cadahay inuu isaaq kusoduulay dhulkeena iskuna baladhiyey aa in qoriga laqaato o lakarbaasho jabhada qawlaysatada ah iyo horgalaha dayuuska dayuusku dhalay e horboodaya waar dagaalka kowaad waa in laguqaado damiir laawayaasha dabada u dhaqa idoorka idoorku dhalay e hawayda ah
isaaq waa dad aan taariikh hore lahaanjirin waxay rabaan inay dhuka dhulbahante taariikh kuhelaan hadaytaa kuriyoodeen haxusuusteen inaanu ingiriis kadiidnay dhiigna u daadinay dhulkayaga
isaaq waxan u sheegaya inay ingiriis dhul u doontaan lkn dhulkan daraawiishi awoowayaashood ka dhaxashay walee wuxu idiin jira inta cirku idiinjiro WBT
Dadka webkaan is ka leh ma wadi kartaan ku wareejiya dad manage garayn kara hadii kale cuqdada kala dhexbaxa dhulbahantaha dadkaan dhibaato ku flan way haysataa waayo waa lakala qaybiyey oo laysku direy welina iyagaa isu ciil qaba oo is neceb dad aqoon u leh arintan oo lahadla oo u sheega in fahmaan oo walaala noqdaan sida umadaha kale ee dunida ku nool.
War Tukaraq yaa leh , miyaan guryaha iyo ganacsiga ugu badna Bahame lahayn, goormaa ugaadhyahan yeeshay, yaab, mid kale meeyey dhulkii ugaadhyahan maxaad uga hadllaysaan tuuladan yar 90% dhulkiina iyadoon xabad ka dhicin baad wareejiseen, maxaad tukaraq idinka galay yaab